ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးနှင့်မိုဘိုင်းလ်လုံခြုံရေး - Applock APK ကို Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးနှင့်မိုဘိုင်းလုံခြုံရေး - လျှောက်လွှာ
ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးနှင့်မိုဘိုင်းလုံခြုံရေး - Applock APK
မိမိကိုယ်ကိုဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဝဲလ်များမှကာကွယ်ရန်နှင့်မလိုလားအပ်သောကြော်ငြာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသော Antivirus & Mobile Security - Android အတွက်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအခမဲ့ antivirus app တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်သော spyware နှင့် adware အက်ပလီကေးရှင်းများတပ်ဆင်သောအခါသတိပေးနှိုးဆော်ပါ။ အီးမေးလ်၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ၊ ရောဂါကူးစက်ခံရသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ် SMS စာတိုများမှသင်၏ကိရိယာများကို phishing တိုက်ခိုက်မှုများမှကာကွယ်ပါ။
Mobile Security & Antivirus သည်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းခြင်းထက်များစွာပိုပါသည်။
ဤအပေါ့ပါးသော app တွင်ထည့်သွင်းထားသောအခြားအင်္ဂါရပ်အချို့ကိုဤတွင်တွေ့နိုင်သည်။
ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးနှင့်မိုဘိုင်းလုံခြုံမှု - အက်ပလီကေးရှင်း၊ ဖုန်းနံပါတ်ခေါ်ဆိုမှု၊ ထည့်သွင်းထားသောအက်ပ်များ၊ မှတ်ဉာဏ်ကဒ်အကြောင်းအရာနှင့်အက်ပ်အသစ်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဝဲလ်များနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်လုံခြုံရေးသည်ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ adware၊ malware၊
? ဖုန်း Boost
? privacy ခွင့်ပြုချက်
? RAM ကိုမြှင့်တင်
ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးနှင့်မိုဘိုင်းလုံခြုံရေး - လျှောက်လွှာ
¶ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးအင်ဂျင် - ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးစကင်နာသည်ပထမအသုံးပြုမှုတွင်ကူးစက်ခံရသည့် / အန္တရာယ်ရှိသောအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် Trojan များအလိုအလျှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည်။ မိုဘိုင်းကာကွယ်မှုအတွက် Web & file scan ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် spyware နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များကိုလည်းကာကွယ်သည်။
¶ Clean Junk - မလိုအပ်သောအချက်အလက်၊ system cache၊ gallery thumbnails, installation files နှင့် residual files များကိုချက်ချင်းဆေးကြောပါ။
ifi Wifi လုံခြုံရေး - ကွန်ယက်တစ်ခုချင်းစီ၏လုံခြုံမှုကိုစစ်ဆေးပြီးသင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုငွေပေးချေပါ။
L AppLock - သင်၏လူမှုရေးဆိုင်ရာအသုံးချပရိုဂရမ်များပေါ်တွင်မိန်းကလေးသို့မဟုတ်ရည်းစားနောက်ကြောင်းရာဇ ၀ င်ကိုစိုးရိမ်ပါသလား။ မိဘ / သူငယ်ချင်းများသည်သင်၏ဓာတ်ပုံပြခန်းကိုကြည့်နေသလား။ AppLock ဖြင့်ယခုအားလုံးကိုပိတ်ထားပါ
Bo ဖုန်းအာနိသင်တိုးမြှင့်ခြင်း - ဖုန်းရှိသိုလှောင်နေရာလွတ်ကိုသက်သာစေရန်၊ ဖုန်းကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အတွက်ဖုန်းအက်ပ်တစ်ခုထဲရှိနောက်ခံအက်ပ်များကိုဖယ်ရှားပါ။
¶ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးနှင့်လုံခြုံရေး - အလိုအလျောက်ဗိုင်းရပ်စ်ရှာဖွေတွေ့ရှိသော Android အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားခြင်း။
Mobile Lab အတွက်လုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံရေး
Mini ကို Antivirus ကို: ...